NRNA: बिधान संसोधन, NCC हरुको अनुगमन र मुल्यांकन-उपाध्यक्ष पन्त
NRNA VP, Kumar Pant
by KRISHNA KC | Updated: 15 Aug 2018
कृष्ण के सीअमेरिका
गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष कुमार पन्त अक्टुवर २०१७ मा दोश्रो कार्यकालका लागि पनि उपाध्यक्ष नै निर्वाचित हुनुभएको हो। यसर्थ संघका तीन उपाध्यक्ष मध्ये सिनियरमा पर्नुहुन्छ भन्दा बैधानिक नभए पनि असान्दर्भिक नहोला।
हुन त जसरी सेना र प्रहरीमा एकै समय, एउटै नम्वरीहरुमा पनि पहिलो र दोश्रो मान्दै हरेक कारणले सिनियारका आधारमा नेतृत्व दिने कारण हुन्छ र प्रचलन पनि छ। त्यो अर्थमा उपाध्यक्ष पन्त वरिष्ठ नै पर्नुहुन्छ र आगामी २०१९-२०२१ कार्यकालका लागि अध्यक्षका प्रत्यासी पनि पक्कै हो भन्दा कथा बुनेको नहोला।
हुनत यो प्रसंग धेरै छिटो भएको छ, सन्दर्भ उठीसकेको छैन तर पनि वास्तिविकता या सत्यता तेही नै हो भन्ने मेरो ठम्याई छ। सत्य कुरा भन्नलाइ साइत कुर्नु पर्दैन तर पनि मेरो उधेश्य चुनावी रनौक थप्नु पटक्कै होइन। अझै पनि त्यो समय आउन १४ महिना भन्दा धेरै बाँकी छ। अन्तिममा आएर धेरै कुरा हुनसक्छन त्यो हामी सबै जानिफकार नै छौं। तर यहाँ भने एउटा छुट्टै प्रसङको लागि यो पटक लेख्दैछु।
हजुर, अगाडी शिर्षकमा नै अलिकति बिषय उक्काएको छु। संघका उपाध्यक्ष कुमार पन्तसंगको नियमित कुराकानीमा संघको दुइपक्ष अभियन्ताहरु र राष्ट्रिय समन्वय परिषद (NCC ) बारे हलिउड खबरको लागि यो पंतिकारसंग उहाँले भन्नु भएको कुरा यहाँ उल्लेख गर्दैछु।
सबै अभियन्ताहरुलाई कसरी समेट्ने त ?
निर्वाचनमा पराजय भएकाहरुलाई कुनै नियुक्त गर्ने पदिय जिम्मेवारीमा राख्न नपाइने भन्ने वर्तमान बैधानिक ब्यबस्था संसोधन हुनु जरुरी देखियो। त्यो राजनैतिक ब्यबस्था या अन्य संघ-सँस्थामा सहज भएता पनि गैरआवासीय नेपाली संघमा सहज भएन। यसले अभियन्ताहरुलाई पाखा लगायो उपाध्यक्ष पन्तले भन्नुभयो।
यसका मुख्य तीन कारण रहन गयो।
लामो समय देखि योगदान दिएका, तत्काल पनि संघको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण व्यक्ति निर्वाचनमा जाने स्वभाविकै हो। उनीहरुमध्ये निर्वाचनबाट जम्मा एकजनाले बिजय पाउने र बाँकी सबै बाहिरिने अवस्था निश्चित नै हो। तसर्थ पनि हालको बिधानमा पराजितहरुलाई नियुक्ति गरेर ल्याउन नै नहुने भन्ने व्यवस्थाले कठिन अवस्था आएको छ। यसबाट ठूलो संख्या बाहिरिने र निर्वाचित टिमको सेरो-फेरो मात्र संघमा रहने अवस्थाको विकास हुने देखियो। जुन अत्यन्तै असहज कुरा मलाइ लागि रहेको छ। केहि अभियन्ताहरुको नाम नै लिएर उहाँहरु जस्तो व्यक्तिहरु ऐले सकृय नदेख्दा मैले यो कुरा बुझेको हुँ उपाध्यक्ष पन्तले भन्नुभयो।
मेरो यो अवधीमा धेरै अनुभव भयो। पछिल्ला समयमा टिम बेसमा चुनाव हुँदा पराजित टिम जिम्मेवारीबाट बाहिरिने हुनाले बिजयी टिमले सबैको प्रतिनीधित्व गर्न कठिन हुने देखियो। पराजित टिम जसले लगभग आधा हिस्सा बोक्छ त्यो शक्ति सहभागी हुने या नहुने कारणले संघमा सबैको प्रतिनीधित्व खड्किन्छ। तेस्तो ठाउँमा केही निर्वाचनबाट पराजित व्यक्तिलाइ नियुक्त गर्दा सहभागिता र ब्यालेन्स हुन्छ, जुन कुरा संघको लागि फाइदा हुन्छ। त्यसैले पनि यो बिधान संसोधन हुनु जरुरी देखेको छु उपाध्यक्ष पन्त भन्नुहुन्छ।
बिजयी टिमले मात्र काम गर्दै जाँदा एक किसिमको संघको काम भन्दा पनि चुनाब र राजनैतिक पार्टीको जस्तो गुट विकास हुँदै जाने संका पैदा हुन लग्यो। अर्को कुरा विस्तारै त्यो कुरा विकास हुँदै गयो भने प्रजात्रान्त्रिक रुपमा भएको नेतृत्व चयनले पक्ष, विपक्ष र प्रतिशोध बढ्दै जाँदा संघलाइ झन खतरा बढ्ने देखियो। अर्को तर्फ बिजयी टिमले अर्कापक्षलाइ दवाउने होडवाजीमा एकाधिकार जस्तै हुने, पक्ष-विपक्ष हुने र संघमा विभाजन आउने अवस्था देखियो। त्यसैले बिधानमा उपविजेता या पराजितमध्येलाइ पनि निश्चित पदिय निम्मेवारीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु, पन्त भन्नुहुन्छ।
संसारभरि छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको संख्या दैनिक रुपमा बढेको छ। एक तीहाई जनसंख्या नेपाल बाहिर हुन लाग्यो। गैरआवासीय नेपाली नागरीकतालाइ कुँजो बनाउने तरिका एकातिर उठेको छ भने अर्कोतिर बनेका संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले निर्देशिका अनुरुपम काम नगरेको या तेता तिर कम उन्मुख भएको अवस्था आएको छ।
अब त्यसबारे के गर्ने त ?
म महासचिव भएको बेला सबै एनसीसीहरुको लागि एउटा नीति बनाएको थियो। स्थापनाको पहिलो तीन कार्यकालमा सबै मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने। तर ऐले ती सबै पुरा भएको अवस्था देखिएन। धेरै ठाउँ जस्तो अमेरिका लगायत देशमा विवाद बढ्दै गएको छ। तसर्थ मैले एउटा योजना बनाएको छु। आगामी बैठकबाट पारित भएमा तुरुन्त कार्यान्वयनमा गईनेछ।
त्यसको लागि एउटा छुट्टै कमिटि बनाइनेछ। कमिटीले सबै एनसीसीहरुलाई मापदण्ड भित्र राखेर नियमति रुपमा मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक र दुइ बर्षे रुपमा अनुगमन र मुल्यांकन गर्नेछ। बिचमा मापदण्ड पुरा नगरेका एनसीसीहरुलाई एफिलेशन रिभोक गर्ने, नयाँ या स्थापना गर्दा के के मापदण्ड हुने, उत्कृष्टलाइ कसरी रिवार्ड गर्ने जस्ता सबै कुराहरुको नीति-बिधि र ब्यब्स्स्था गर्ने गरि काम गर्ने योजना छ। यसका लागि संघमा परामर्श गर्दैछु, निर्णय छिट्टै आउने छ, उपाध्यक्ष पन्त भन्नुहुन्छ।
आगामी अक्टोवरको बिधानसभामा यो बिषयमा आफूले बिशेष पहल गर्ने कुरा समेत संघका उपाध्यक्ष पन्तले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो।
एमालेको देशैभरका वडा अधिवेशन कात्तिक ६ गते हुने
नेकपा एमालेले कात्तिक ६ गते शनिबार देशैभरका सबै स्थानीय तहका वडाहरुको अधिवेशन एकसाथ उद्घाटन गर्ने भएको छ ।
एकीकृत समाजवादीमा ३३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्माण
गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यकाल थप्ने कुनै निर्णय भएको छैन
मेलम्ची इन्द्रावती सडक पुन : अवरुद्ध
साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाल पराजित
एनआरएनए आइसीसीको कार्यकाल आइतबार सकिंदै, ३० नोभेम्वरमा चुनाव गराउन अध्यक्ष पन्तको प्रस्ताव
एनआरएनमा संरक्षक परिषद् अगाडी बढेर समस्याको समाधान गर्न पहल गर्नु पर्छ
३५ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
एनआरएनए एनसीसीहरुको अन्तराष्ट्रिय भेला अक्टुवर २४, अध्यक्ष पन्त र प्रमुख संरक्षक घले प्रमुख अतिथि
राष्ट्रपति भण्डारीबाट आफ्नै आमा र पुजारी अर्यालबाट दशैंको टिका ग्रहण
एनआरएनएमा परराष्ट्रको निर्देशन छलेर पदावधि बढाउने दाउ, समाचार विश्लेषण
एनआरएनएको रोकिएको महाधिवेशन, संरक्षक परिषद, एनसीसी अध्यक्ष भेला र विकल्पहरु
फुलारा लिटरेचर फाउण्डेशनद्वारा अन्तराष्ट्रिय मानार्थ सम्मान २०७८ द्वारा ३१२ जना सम्मानित
ललितपुरको धापाखेलमा बन्दक बनाइएका पाकिस्तानी नागरिक झ्यालबाट हाम फालेर प्रहरी शरणमा
VIDEO:	शान्ति श्रीपरियार र केशव रिजालको नयाँ गीत चाँदनी
ललितपुरको सुनाकोठीमा डोरीकै लागि कमलाको हत्या
एनआरएनएको विवाद समाधान गरी निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषद् तयार र सक्षम छ
एनआरएनहरुको महाधिवेशन सर्ने, चुनाव हार्नेको बितण्डा र हण्डीकारको नाङ्गो हर
१८ औं गैरआवासीय नेपाली दिवस २०२१ को कार्यक्रम
वरिष्ठ साहित्यकार नगेन्द्रराज शर्मा अभिनन्दन मूल आयोजक समितिबाट प्रेषित समाचार
ललतिपुरका राजकुमार भुलुनको आफ्नै श्रीमतीको योजनामा हत्या भएको प्रारंभिक प्रतिवेदन
कांग्रेसको कार्यदिशा: बलियो पार्टी, युबालाइ अवसर, २५ लाख नयाँ मतदाता
उनले भने- सफा र चिटिक्क पहिरन लगाउनाले मन चंगा हुन्छ र जोश बढेर आउँछ
माटाे पानी रगत पसिना हाे नि याे जिन्दगानी
अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा मन्दिर निर्माण गर्न १७ एकड जमिन सहित ८ लाख ५० हजार डलर नगदमा भवन खरिद
परराष्ट्रको चिठी:एनआरएनए जापान र जर्मनीमा चुनाव, युके र अमेरिकामा नपर्ने, समाचार विश्लेषण
विधान विपरितका काम तत्काल सच्याउन एनआरएनएलाई परराष्ट्रको निर्देशन, समयमै महाधिवेशन गरौँ:आचार्य
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण दर ६० प्रतिशतले घट्यो
दशैँका लागि आजदेखि खसीबोका बिक्री सुरु
दशैँको तेस्रो दिन आज, चन्द्रघण्टाको पूजा गरिँदै
एनआरएनलाइ परराष्ट्रले भन्यो:महाधिवेशनका ६५ प्रतिशत खारेजी, पुरानो चलन अनुसार लिनु
नेपाल राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह र लुसिफरको नेपाल माथि राज:एक प्रसङ्ग
VIDEO:	टिकापुर बजारमे देख्नु तुहिन अत्र जादा छैली तुह मन परलो महिन
VIDEO:	पिपल मणि सिग्देलको यो मार्किक कविता वाचन
पछिल्लो विस्तारले बल्ल पुर्णता पाएको नेपाल सरकार, को बने मन्त्री ?
एनआरएनए अष्ट्रेलियाका पुर्व अध्यक्ष गणेश के सीको उपाध्यक्षमा उमेद्वारी घोषणा
यस वर्ष पनि कांग्रेसले चियापान समारोह नगर्ने
दशैंको दोस्रो दिन आज ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गरिँदै
कांग्रेस सहमहामन्त्री महत नेतृत्वको टोली भारत प्रस्थान
आजदेखि बडादसैँ सुरू
घटस्थापनाको अवसर पारेर फिल्म ‘एक’ रिलिज
बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा २३ प्रतिशतले बढायो
पत्रकारको हकहितका लागि पत्रकार महासंघद्वारा माइतीघरमा प्रदर्शन
सशस्त्र प्रहरीद्वारा २८ वटा मानव खप्पर र हड्डी बरामद
रात्रीकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि १४ सदस्सीय कार्यदल गठन